कोरोना संक्रमित नै भाग्न थालेपछि निषेधित क्षेत्र घोषणा, सेना परिचालन गरिने — Sanchar Kendra
मन्त्रालयका कर्मचारी महाशाखा प्रमुख रघुराम विष्टका अनुसार मन्त्रालय आउजाउ गरेका सबै कर्मचारीको परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ । उनले भने ‘एक सयभन्दा बढीको परीक्षण गरिन्छ होला ।’ चिकित्सकहरूका अनुसार संक्रमितसँग सम्पर्कमा आउनासाथ स्वाब झिकेर परीक्षण गर्दा गलत रिपोर्ट पनि आउन सक्छ ।
सोही कारण संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको एक सातामा स्वाब झिक्दा गलत रिपोर्ट आउने सम्भावना कम हुन्छ । ती चिकित्सकको प्राइमरी कन्ट्याकमा आएका मन्त्रालयका कर्मचारीहरू होम क्वारेण्टाइनमा बसिरहेका छन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भए, नभएको पत्ता लगाउन पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौँपछि सबैभन्दा बढी कोरोना परीक्षण जुम्लामा भएको छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा २२ वैशाखदेखि कोरोना पिसिआर उपकरण सञ्चालनमा आएको प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा मङ्गल रावलले बताए। मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २१ हजार २९५ जनाको पिसिआर भएको छ।
त्यसपछि दोस्रो जुम्लामा दुई हजार ७६० जनाको पिसिआर परीक्षणको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको उनले बताए। तेस्रो स्थानमा भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जमा दुई हजार ३७९ जनाको पिसिआर भएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशकै सुर्खेतमा भने दुई हजार २९४ जनाको पिसिआर भएको छ।
प्रतिष्ठानले माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालिकोटमा परीक्षण गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले भारतबाट आएका र शङ्कास्पद व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण गरिएको बताए। उनका अनुसार आइतबारसम्म दुई हजार ७६० जनाको परीक्षण भएको छ। सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको उनले बताए। प्रतिष्ठानले प्रयोगशाला प्रमुख विवेक पुन मगरको नेतृत्वमा परीक्षण कार्य गरिरहेको छ।
हुम्ला र मुगुमा आरडिटी पोजेटिभ देखिएका तीन जनाको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार हुम्ला नाम्खाका दुई र मुगु खत्याडका एक जनाको आरडिटी पोजेटिभ देखिएको थियो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि पिसिआर मेसिनमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिका कारण परीक्षणमा सहज भएको छ ।
प्रतिष्ठानमा कार्यरत औषधि विज्ञानका चिकित्सक डा विजय अर्यालयले पिसीआर मेसिनको बारेमा पहिल्यै अध्ययन गरेको र प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा निरेश थापाले चीनमा यसअघि नै उक्त मेसिनमा काम गरिरहेको हुनाले पनि परीक्षणमा सहज भएको रजिष्ट्रार काफ्लेले बताए।
जुम्लामा अहिले कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि अत्याधुनिक ल्याबमा दुई चिकित्सकसहित प्रयोगशालाका चार प्राविधिक छन्। प्रयोगशालामा पिसीआर सञ्चालन हुनुअघि प्रयोगशाला प्रमुख पुनमगरले सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा गएर मेसिन सञ्चालनका लागि तालिमसमेत लिनुभएको हो।
रजिष्ट्रार काफ्लेले माथिल्लो कर्णालीमा परीक्षणको दायरा अझै बढाउने बताए। उनका अनुसार प्रतिष्ठान आफैँले थप दुई हजार भिटीएम किट खरिद गरिसकेको छ । ती भिटीएम मङ्गलबारसम्म जुम्ला पुग्ने उनले बताए। प्रतिष्ठानले कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा हेलिकोप्टर प्रयोग गरी हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा स्वाब सङ्कलन कार्य गर्ने गरेको छ।
मेडिकल मार्चअन्तर्गत चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली पनि ग्रामीण क्षेत्रमा खटिएको रजिष्ट्रार काफ्लेले बताए। डोल्पा जिल्लाको मुट्केचुल्ला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा प्रतिष्ठानले स्वाब सङ्कलनका लागि चिकित्सकसहितको टोली खटाएको छ। दुई, चार दिनभित्र त्यहाँका सङ्कलित स्वाब जुम्ला ल्याएर परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
बारामा किट अभाव हुँदा सम्भावित कोरोना संक्रमितको परीक्षणमा ढिलाइ भएको छ । पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको तर स्वाब संकलन गर्ने भाँडा (भीटीएम) र पीसीआर किटको अभाव हुँदा परीक्षणमा ढिलाइ भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।
उनले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन्,
‘पीसीआर र आरडीटी टेस्ट कसका लागि ? डब्लुएचओ तथा नेपाल सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकलअनुसार क्वारेन्टाइनमा बसेका आशंकित र पोजेटिभको कन्ट्याक ट्रेसिङ र ट्रयाकिङमा पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र परीक्षण गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ! तर, अहिले सरकारी पदाधिकारी, वडासम्मका निर्वाचित पदाधिकारी, घरैमा र स्टुडियोमा बसेर काम गर्ने पत्रकारहरूबाट समेत परीक्षण गराउनको लागि अनुरोध आइरहेको छ । फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने र आफ्नै सिपाहीको पोजेटिभ आउँदा पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले स्वाब परीक्षण नगराएको अवस्था छ।
वास्तविक आवश्यक पर्ने लक्षित तथा आशंकित व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा दुई हप्ता पुग्दा पनि परीक्षणको सुविधा पाउन नसकेको अवस्था छ । किटको अभाव हुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेकोले सबैको अपेक्षा पूरा गराउन असमर्थ रहेको व्यहोरा विनम्र अनुरोध गर्दछौं । फेरि यो आज परीक्षण गरेपछि भविष्यमा कोरोना भाइरस नलाग्ने भ्यक्सिन पनि होइन । पोजेटिभ देखिएको बिरामीलाई पनि नेगेटिभ नआउन्जेल परीक्षण गरिरहनुपर्छ । तसर्थ पीडित मानव जीवन रक्षाको लागि आवश्यकता जहाँ छ त्यहाँ पुर्‍याउन सहयोग गर्नुहोस् ।’
पछिल्लो समय जिल्लामा संक्रमितको संख्या ह्वातै बढेको पनि उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको परीक्षणमा ढिलाइ भएको प्रजिअ पण्डितले बताए । ‘संक्रमित भेटिएको क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको समेत परीक्षण गराउन सकेका छैनौं’ उनले भने ।
प्रजिअ पण्डितका अनुसार तत्कालका लागि एक हजार थान किटको आवश्यकता रहेको छ। जिल्लाको विभिन्न १६ स्थानमा बनाइएका ३३ वटा क्वारेन्टाइनमा अहिले पनि ६०४ जना मानिस बसिरहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा बस्ने अधिकांश भारतबाट फर्किर आएकाहरू छन् । क्वारेन्टाइनमा दुई हप्ताभन्दा बढी समय बसिसकेका उनीहरूलाई परीक्षण नगरी घर पठाउँदा थप जोखिम बढ्न सक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
प्रजिअ पण्डितले भने, ‘शुक्रबार एकैदिन सिम्रौनगढ क्वारेन्टाइनमा बसेका छ जना व्यक्तिहरूमा संक्रमण पुष्टि भयो । यसले के देखाउँछ भने क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको परीक्षण गराउनु आवश्यक छ ।’ दुई साता बसेकै भरमा ज्वरो मात्रै नापेर पठाउँदा समुदायमा जोखिम बढ्नेछ । क्वारेन्टाइनमा बसेकामध्ये ६४४ जना भने घर फर्किसकेका छन् ।
संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका पाँच जना जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको आइसोलेसनमा छन् । उनीहरूको वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालबाट परीक्षण गरिसकिएको छ ।
प्रजिअ पण्डितका अनुसार बारामा अहिलेसम्म १२ जना संक्रमितमध्ये कलैया अस्पतालको आइसोलेसनमा नौ जना उपचाररत छन्। एक जना वीरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचाररत छन् । दुई जना भने शनिबार मात्रै नारायणीबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुद्दा शाखामा कार्यरत एक जना प्रहरी जवानमा संक्रमण पुष्टि भएपछि उनको सम्पर्कमा आएका २५ जना सुरक्षाकर्मी बालमन्दिरको आइसोलसेनमा रहेको प्रजिअ पण्डितले बताए । उनीहरूको परीक्षण भइसकेको छ । उनका अनुसार बारा जिल्लामा ४१३ जनाको पीसीआर र ३१६ जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ।